देबी माताको पाउलाई छोएर दर्शन गर्नुहोस ,तपाइको मनोकामना पुरा हुनेछ ! जय माता दि ! | सुदुरपश्चिम खबर
देबी माताको पाउलाई छोएर दर्शन गर्नुहोस ,तपाइको मनोकामना पुरा हुनेछ ! जय माता दि !
(manakamanadaily.com बाट साभार )